आडू संग केक
कहिलेकाहीं म केहि स्वादिष्ट र मीठो चाहनुहुन्छ, र खान के थाहा छैन। त्यसैले म मेरो केटाहरू लामो एक मिठाई केक लागि आग्रह गरेका छन् विशेष गरी देखि, आडू संग एक मिठाई केक Bake निर्णय गरे।
, सुरुमा आटा तयार। हामी एक स्लाइड, बेकिंग पाउडर प्याकेट वा पीठो को 600 ग्राम, घिउ (घिउ वा margarine) को एक प्याकेट, 3, अन्डा, चिनी एक कप आवश्यक hydrated सोडा, वेनिला चीनी स्वाद को लागि। अन्डा संग triturated चीनी, को पग्लियो घिउ वा margarine थप्न वेनिला र disintegrant मिश्रण थप्नुहोस्। पीठो, गांठ जोगिन कडा आटा मिश्रण गर्न साना अंश परिचय। आडू संग केक सजिलो र स्वादिष्ट उत्तेजित गर्दछ यो परीक्षण मा, यो आफ्नो मुख मा पिघलने।
एक भर्नको रूपमा हामी आडू प्रयोग गर्नुहोस्। यो केक बारेमा 500 ग्राम आवश्यक हुनेछ लागि, 3-4 ठूलो आरु छ। मेरो आडू, आधा कटौती, पिट हटाउन र स्लाइस मा आधा विभाजन। को भारी क्षेत्र को लागि इष्ट भनेर आकारमा राख्न जलाशय मा आटा, बाहिर रोल। हात छाप र आरु को स्लाइस माथि राखे। परीक्षण को किनाराको कवर, तपाईं आधा-खुला पाइ प्राप्त। आधा एक घण्टा ओवन मा Bake। खैर, आडू हाम्रो केक तयार, तपाईं सुरक्षित प्रियजनहरूलाई व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै ताजा जामुन र फल छ भने स्याउ, kiwi, खुबानी, केले, साधारण, ब्लूबेरी, स्ट्रबेरी वा जाम: सामान्य मा, आडू को सट्टा, तपाईं कुनै पनि फल र जामुन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सधैजसो, म अवस्थित व्यञ्जनहरु को आधारमा परीक्षण गर्न प्रेम। यस समयमा, म तपाईंलाई बताउन कसरी Bake गर्नेछ घरेलु पनिर संग केक र आडू। घिउ, 1 अन्डा को एक प्याक, चीनी को आधा कप, पीठो 200 ग्राम र पाक पाउडर को 1 चम्मच:, त्यसैले हामीले निम्न उत्पादनहरु आवश्यक आटा तयार। अन्डा, चीनी र नरम घिउ, संयुक्त triturated, सोता बेकिंग पाउडर, फेरि हलचल। , पीठो बिस्तारै शुरू हुन आटा मुछ्नु।
भरने तयार। हामी क्रीम, ¾ कप चीनी,2चम्मच स्टार्च, वेनिला र कागति को रस को एक प्याक, क्यान्ड आडू (500 ग्राम), बोसो घरेलु पनिर दुई पैक को 1 जार आवश्यक हुनेछ (म प्रयोग एक 9%) दुई अन्डा। एक गहिरो कचौरा मा, संयोजन घरेलु पनिर, चीनी, अन्डा, क्रीम, स्टार्च, वेनिला, साढे कागति को रस squeeze। सबै मिश्रण र बिट फ्लफी ठूलो सम्म।
समाप्त आटा बाहिर लुढका र फारम को गहिरो तल वितरण गरिएको छ। हाम्रो रसीला घरेलु पनिर र खट्टा क्रीम ठूलो भर्न, हाम्रो आडू लिन र सुन्दर घरेलु पनिर तिनीहरूलाई राखे, हामी प्रेस छैनन् - तिनीहरूले curd मा डुब्नु। कटौती गर्ने आडू आवश्यक छैन। वास्तवमा यो नुस्खा लागि आटा बालुवा उत्तेजित गर्दछ किनभने, आडू एक बालुवा केक छ। यो नुस्खा पूर्ण खुबानी संग केक बाहिर जान्छ। यो केक अन्यथा तपाईं को भिजेको अबोध्य ठूलो प्राप्त, बस खुला हुनुपर्छ आटा, पनीर र फल।
यसलाई कुनै पनि curd केक को तातो curd कच्चा propokshegosya छैन केक को प्रभाव देखि, ostyvshimi पठाइएको पर्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। र न्यानो केक आधा एक घण्टा फ्रिज राख्नु भने, तपाईं ठूलो प्राप्त cheesecake मिठाई चिया संग।
आडू र घरेलु पनिर र साथ केक एक बच्चाको छुट्टी लागि उपयुक्त छ, यस्तो जन्मदिन रूपमा, त्यो केक को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, सबै बच्चाहरु सन्तुष्ट हुनेछ।
यस्तो केक, पाठ्यक्रम, छोराछोरीलाई लागि धेरै राम्रो, क्याल्सियम र पशु प्रोटिन को एक ठूलो रकम समावेश घरेलु पनिर जस्तै छ - यो सबै बस विशेष मा एक बढ्दै बच्चाको शरीर र कंकाल आवश्यक छ। तिनीहरूले, बारी मा, मस्तिष्क स्थिर प्रदर्शन लागि जिम्मेवार छन् प्रतिरक्षा प्रणाली समर्थन, lethargy र कमजोरी को भावना राहत, को बच्चा vivacity र ऊर्जा एक शुल्क दिन - आडू बी भिटामिन मा धनी छन्। त्यसैले, सज्जनहरु, वयस्क, आफ्नो टाउको मा जनाए, सेंकना cheesecake आडू संग, स्वाद र स्वस्थ जीवनको आनन्द! तपाईंको चिया आनन्द लिनुहोस्! र छोराछोरीलाई यो अद्भुत curd मिठाई खुवाउन भूल छैन!
कपास चकलेट - आनन्द ल्याउँछ कि एक व्यवहार!
नुस्खा sticks: स्वाद बाल्यकाल देखि परिचित छ
"भालु Bruin" (मिठाई): संरचना, वर्णन, मूल्य
के चिया को एक स्वादिष्ट कप Bake गर्न?
स्वादिष्ट र आनन्द तयार: "। Pancho" चेरी केक नुस्खा र खाना पकाउने मूल्यवान सल्लाह
पास्ता लागि लेदो कसरी खाना पकाउनु। मूल र स्वादिष्ट नुस्खा
लागि बाल सौन्दर्य Moroccanoil उपाय: समीक्षा उत्पादन
Coleitis: कारण, लक्षण, उपचार
अनुहार र cosmetology लागि कस्मेटिक्स मा hyaluronic एसिड
होटल T5 सूट पटाया3* (थाईल्याण्ड, पटाया): फोटो र समीक्षा
Sempai गर्ने हो? अर्थ, प्रयोग विशेषताहरु
अल्ट्रासोनिक Cavitation: विरामीहरु को समीक्षा
मेट्रो "Tushino" - एउटा महत्त्वपूर्ण यातायात मास्को
केटी कसरी प्रभावित
समीक्षा र विवरण: "खाद्य कोर्ट" बाट भान्सा